अब राजनीति सफा गर्ने आन्दोलन चलाऔं – Purbihotline
हिजो हामीले के भन्यौं भने संक्रमणकाल छ, संविधान बनाऔं, संक्रमणकाल टुंग्याऔं अनि विकास गर्न सक्छौं । संक्रमणकाल पनि सकियो, संविधान पनि बन्यो । त्यसपछि हामीमा बहुमतसहितको स्थायी सरकार नभएर पो विकास नहुनेको हो कि भन्ने चिन्ता थियो । त्यो पनि नेकपाको पहलकदमीमा स्थायी सरकार बन्यो । ५ वर्ष सरकार टिक्ने ग्यारेन्टी भयो । अहिले राजनीतिक संघर्षको एउटा अध्याय समाप्त भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । अझै हामीसँग विकास र समृद्धि किन आउन सकेन रु अब के भन्नुहुन्छ रु निरंकुशताले गर्दा भन्नुहुन्छ रु संक्रमणकालले गर्दा भन्नुहुन्छ रु स्थायी सरकार छैन भन्नुहुन्छ ? अब भन्ने ठाउँ छैन । अब काम गरेर देखाउनुपर्छ । अब नेपाली जनताले आफ्नै जीवनमा अनुभूति गर्न पाउने समृद्धि हासिल गर्ने काम बाहेक हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन ।
अझै पनि देशमा किन विकास हुन सकिरहेको छैन रु किनभने समृद्धिमा पुग्न नदिने हामीसँग अझै एउटा फलामको ढोका छ । त्यो फलामको ढोका भनेको राज्यमा, राजनीतिक पार्टीहरुमा र समाजमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार हो । यो भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नछेडिकन, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण नगरिकन र सुशासन स्थापित नगरिकन कुनै पनि हालतमा समृद्धिको लक्ष हासिल सकिँदैन । सुशासन कायम गर्न सकिएन भने समृद्धि हासिल हुन सक्दैन र नेपाल जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । यसले जनतामा ठूलो निराशा पैदा गर्छ । यो निराशाले दक्षिणपन्थी शक्तिहरुलाई आधार तयार गर्छ । यसबाट नेपालको राष्ट्रियतामाथि पनि खतरा पैदा भएर जान्छ । यसले दुबैखालका खतरा पैदा हुन्छन् र विखण्डकारी शक्तिले पनि मलजल पाउँछ ।
के हामी राजनीतिक सफाइ आन्दोलनका लागि तयार हौंला रु यो सजिलो छैन । म तपाईहरुलाई भनौं, नेपालमा काम नगरिकन, राजनीतिक पार्टीमा लागेर कमिसन र दलालीको भरमा वैभवशाली जीवन बिताउने बीसौं हजार नेता कार्यकर्ता छन् । यस्ता नेता कार्यकर्ताहरुको भरमा समृद्धि कसरी हुन्छ ? भ्रष्टाचारविरोधी भाषण गर्ने तर मेरा नजिकका बाहेक अरुलाई मात्रै कारवाही गर भनेर कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ रु त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने अब राजनीति सफाइ गर्ने आन्दोलन चाहिएको छ । यो आन्दोलन पार्टीभित्र पनि चाहिएको छ र समाजभित्र पनि चाहिएको छ । अनिमात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । पाँच वर्षमा एकचोटि चुनाव हुने, एउटा सरकारमा गठन हुने र अर्को सधैं विरोध गर्ने प्रतिपक्ष हुने । के यति भएपछि लोकतन्त्र हुन्छ रु लोकतन्त्र त आफूलाई सधैं विकसित गरिरहने प्रणाली हुनुपर्छ । र, दोस्रो, जनता सधैं सचेत भइराखनुपर्छ । जनताको सचेत निगरानी हुनुपर्छ । पाँच वर्षमा चुनाव हुने र पाँचवर्षसम्म जे जे गर भनेर छाडा छोडिदिने अनि प्रतिपक्षले पनि विरोधै मात्रै गरिरहने परम्परा सही होइन । त्यसैले जनताको सचेत निगरानीलाई लोकतन्त्रको अभिन्न अंग बनाइनुपर्छ । यसका लागि नागरिक समाजको भूमिका अपरिहार्य छ । किनभने सत्ताको चरित्र स्वाभाविकरुपले दमनकारी र निरंकुश चरित्रलाई अंकुश लगाउनका लागि नागरिक समाज सधैं सक्रिय हुनुपर्छ ।
← विद्युत् चुहावट गर्ने नौ जना पक्राउ
किन बन्दैछ सरकार एनजीओको खेलौना ? →
कानूनी शासनको प्रत्याभुति गर